I-beta yokuqala ye-iOS 13.7 ngoku iyafumaneka | IPhone iindaba
I-beta yokuqala ye-iOS 13.7 ngoku iyafumaneka
Xa yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba i-iOS 13.6 yayiza kuba yinguqu yokugqibela eya kuphehlelelwa ngu-Apple 13, ukusuka eCupertino basandula ukwazisa i-beta yokuqala yento eza kuba luhlaziyo olulandelayo lwe-iOS kunye ne-iPadOS: 13.7 inguqulelo okwangoku ifumaneka kuphela kubaphuhlisi.
Olu hlaziyo lutsha, njengangaphambili, lujolise kwizaziso zokuBhengeza, i-API eyilelwe ukunceda ukunqanda ukusasazeka kwecoronona I-Apple iphuhliswe ngentsebenziswano neGoogle. Ngolu hlaziyo, akukho sidingo sokukhuphela usetyenziso olupapashwe ligunya lezempilo ehambelana nokuthatha ithuba lokusebenza.
U-Apple ubanga ukuba ngoku ungasebenzisa i-API yeSaziso sokuBhengeza ngaphandle kokukhuphela usetyenziso, nangona kunjalo ibango lokuba ubukho benkqubo buxhomekeke kwinkxaso evela kwigunya elifanelekileyo lezempilo. Oku kuvumela abasebenzisi ukuba bazi ukuba isicelo esifanelekileyo sikhona kwilizwe labo kwaye sisafuneka Uyakwazi ukusebenzisa izaziso zokuvezwa.
IOS 14 sele ikwi-beta yesithandathu
Iiseva zeApple zikhutshwe izolo I-beta yesithandathu ye-iOS 14, I-beta yesithandathu evela esandleni se-betas entsha ye-watchOS 7, i-tvOS 14 kunye nohlaziyo olutsha, nakwi-beta, yePodPod yasekhaya.
Kubonakala ngathi kwi I-Apple ingxamile ekuphuhlisweni kwe-beta ye-iOS 14, ukusukela ngeli xesha isingqisho esiqhelekileyo sokukhutshwa (rhoqo emva kweeveki ezimbini) sitsaliwe. Okwangoku asazi ukuba ukukhutshwa kwenguqu yokugqibela ye-iOS 14 kucwangcisiwe.
Okunokwenzeka Iqalisa phakathi ku-Septemba Njengesiqhelo, nangona kunokwenzeka ukuba iApple ifuna ukulinda ukubonisa uluhlu olutsha lwe-iPhone 2020, ke ukuba ufuna ukuzama iindaba eziza kuvela kwisandla se-iOS 14 ngaphambi kokumiliselwa kwayo, ungafaka i-beta yoluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » I-beta yokuqala ye-iOS 13.7 ngoku iyafumaneka
Ndiyathemba ukuba olu hlaziyo lutsha luyakwenza ukuba izaziso zokuvezwa kwe-COVID zisebenze kwi-iphone 6s yam, kude kube ngoku ayikenzi kwezi zangaphambili (13.5 kunye ne-13.6).
Kulindeleke ukuba ibekho nini i-13.7?
IPodcast 11x47: I-iPhone 12, Epic kunye nokunye okuninzi
Amawele ingcebiso, intuthuzelo kunye nombala ngokuzimela okugqwesileyo